By vijayafm on	 July 11, 2019 कृषि, फोटो फिचर, विविध खबर, स्थानीय, स्थानीय तह
दैनिक ४५ हजार लिटर दुध संकलन, गँैडाकोटमा २२ हजार बाख्रापालन
समृद्धिको अभियानमा रहेको गैँडाकोट नगरपालिकाले कृषि तथा पशुपालनका क्षेत्रमा धेरै न्यून बजेट छुट्याएको छ । यस्तो अवस्थामा कसरी समृद्धिका लागि सफलता प्राप्त गर्न सकिन्छ होला ? कृषिकार्यलयहरुले उपलब्ध गराउँदै आएको सेवा स्थानीय तहले कसरी दिइरहेका छन् ? समग्रमा पशुपालन क्षेत्रको विकास र प्रवर्धनमा गैँडाकोट पशु सेवा शाखाले गरिरहेको काम कार्यवाहीका बारेमा विजय खबर पत्रिकाले गैँडाकोट नगरपालिका पशु सेवा शाखाका प्रमुख महेन्द्रप्रसाद भण्डारीसंग गरिएको कुराकानीको सम्पादीत अंश ।
गैँडाकोट पशु सेवा शाखाले के काम गरिरहेको छ ?
आर्थिक वर्ष २०७५÷७६ का विभिन्न विनियोजीत कार्यक्रम सम्पन्न गरिसकेका छाँै । अहिले ७६÷७७ का लागि कार्यक्रम बनाउन व्यस्त रहेका छौँ । यसका साथै पशु विकासको क्षेत्र, पशु स्वास्थ्यको क्षेत्र, नश्ल सुधारको क्षेत्र, बजारीकरणको क्षेत्रको सुधारका लागि पशु सेवा शाखाले काम गरिरहेको छ । गैँडाकोट हाम्रो नगरमा गैँडाकोट १ देखि १८ सम्मको क्षेत्रमा राजमार्ग क्षेत्र अन्तर्गत दुधको पकेट क्षेत्र र पहाडी क्षेत्रमा बाख्रा पकेट क्षेत्रको रुपमा विकास गर्ने गरी काम गरिरहेका छौँ । चालु आर्थिक वर्षमा पनि यो कार्यक्रम रहेको थियो । आगामी आर्थिक वर्षमा पनि यस कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिने गरी नीति तथा कार्यक्रम आइसकेको छ । यसका साथै यस शाखाले नगरमा पशुपंक्षीको अवस्था कस्तो छ, ? संख्या के कस्तो रहेको छ ? तथ्यांक संकलनको काम गरिरहेका छाँै । तथ्यांक संकलनको काम पनि अन्तिम चरणमा पुगेको छ । अहिलेसम्म अनुमानित तथ्यांकको आधारमा काम गर्ने गरिएको थियो । अब बास्तविक तथ्यांक नजिक रहेका छौँ । श्रावण महिनाभरिमा हामी प्रगाति विवरण सहितको प्रतिवेदन निकाल्दैछौँ ।
गँैडाकोटमा पशुपालनको अवस्था कस्तो छ ? समस्याहरु के के छन् ?
गैँडाकोटमा पशुपालनको प्रशस्त संभावना रहेको छ । संभावना रहँदा रहँदै पनि विविध समस्या पनि छन् । पशु आहारको व्यवस्थापन, दुग्धजन्य पदार्थको बजारिकरण, बाच्छाको व्यवस्थापन लगायतका समस्या रहेका छन् । यीनै समस्याको चिरफारका लागि पनि योजनागत रुपमा अघि बढ्न आवश्यक छ । मेहनत पसिना अनुसारको बजार पाउन किसानले सकेको देखिदैन । यस पेशामा दीगो रुपमा रहिरहन गाह्रो देखिन्छ । यति भन्दाभन्दै पनि यस क्षेत्रमा नयाँ पुस्ताको आकर्षण बढ्दै गएको छ ।
पशुका लागि आवश्यक दैनिक खानेकुरा जसलाई पशु आहार भनिन्छ । अझ सजिलो भाषामा भन्नुपर्दा घाँस, दाना, चोकरलाई आहारा भनिन्छ । परम्परागत रुपमा पशुपालन रहेको यस क्षेत्रमा पशुलाई सन्तुलित आहारको बारेमा यथेष्ट ज्ञान रहेको देखिदैन । यसका बारेमा जनचेतना फैलाउनु आवश्यक छ । गोठ निर्माण, पशुमाथिको लगानीले मात्र यस क्षेत्रको विकास सम्भव छैन, सर्वप्रथम ज्ञानको दायरा फराकीलो बनाउनु जरुरी छ । सर्वप्रथम पशुपालनका लागि प्रयोगात्मक ज्ञान आवश्यक छ । यसका लागि पनि सोच बनाइरहेका छाँै । रेशादार खाना पचाउन सक्ने पशुका लागि सधैँ दाना र चोकर मात्र दिदा प्रयाप्त आहार नपुग्ने हुन सक्छ । यसका कारण किसानले सोचे जति लाभ लिन सक्दैन । पशुका लागि हरियो पोशिलो आहारको पनि आवश्यकता पर्दछ । गैँडाकोटमा पशुको संख्याको आधारमा घाँसखेती भएको देखिदैन । हिउँदे घाँस, बर्षे घाँस, बहुवर्षे घाँस तर्फ विस्तारै किसानको आकर्षण बढेको देखिन्छ । यति मात्र होइन जमिनको पनि किसानका लागि समस्या छ ।
दूधजन्य उत्पादनको मूल्य प्रयाप्त रुपमा किसानले पाएको देखिदैन । गैँडाकोट नगरपालिको आगामी आर्थिक वर्षमा दूधजन्य उत्पादनका लाग उद्योग स्थापनाको नीति पनि अघि सारेको छ । यहाँ मासुजन्य उत्पादन पश्चात बजारीकरणमा त्यति धेरै समस्या देखिदैन । राष्टिय तथ्यांक अनुसार २२ अर्बको मासु बाहिरबाट आयात हुन्छ देशमा । तसर्थ पनि मासु जन्य पदार्थको पनि उत्पादनको संभावना प्रशस्त देखिन्छ ।
गँैडाकोट नगरपालिका क्षेत्रकै कुरा गर्ने हो भने पनि करिब २२ हजार बाख्राहरुको प्रारम्भीक तथ्यांक हामीले संकलन गरिसकेका छाँै । गैँडाकोट ३, १८ र १४ मा प्रत्येक घरमा ५ देखि ७ वटा बाख्रा पालन गरिरहेको भट्छौँ । यसले गर्दा पनि गैँडाकोट पशुपालनका लागि संभावनाको क्षेत्र हो । गैँडाकोटको तल्लो भेग गाइपालन र बुंगुरपालनका लागि उपयुक्त छ ।यसैगरी माथिल्लो पहाडी क्षेत्र बाख्रापालनका लागि उपयुक्त क्षेत्र पर्दछ । गैँडाकोटमा माछापालनका लागि किसानहरु त्यति सुरु गरिसकेको अवस्था छैन । तर माछा पालनका बारेमा युवाहरुले चासो राख्दै सोधीखोजीका लागि आउने गर्नुभएको छ ।
दूध उत्पादनको सन्दर्भमा घरबाट डेरी जाने, घरबाट होटल जाने , घरमै खपत हुने दूध गरी दैनिक करिब ४५ हजार लिटर दूध गैँडाकोट क्षेत्रमा उत्पादन हुने गरको छ । डेरीमा मात्रै दैनिक २७ हजार लिटर दूध प्रतिदिन संकलन हुने गरकेो छ । गैँडाकोटमा करिब ८ हजार दुधालु रहेका छन् ।
बाच्छा व्यवस्थापन कसरी गर्ने ?
नीतिगत रुपमा बाच्छा व्यवस्थापनलाई अघि बढाउन आवश्यक छ । यसकालागि छुट्ै सेक्स जिनको प्रयोग हुने गरको छ । बाहिरी देशमा सफल प्रयोग भइसकेको छ । नेपालका केही जिल्लामा पनि पाइलट कार्यक्रमको रुपमा रहेको छ । यसले बाच्छा कम पाउने र बाच्छी बढी पाउन सहयोग पुर्याउने गर्दछ । यसलाई प्रयोगमा ल्याउन सकियो भने मात्रै बाच्छा व्यवस्थापनलाई राम्रोसंग हल गर्न सक्ने थियौँ ।